Between Ubuntu and Window7— MYSTERY ZILLION
361 Mobile Devlopment
120 other mobile
Between Ubuntu and Window 7
June 2010 edited January 2011 in Open Source
ငဇူးတို ့လည်း MZ နဲ ့ကင်းကွာနေတာကြာပေါ့။ဒါပေ ့မယ် သံယောဇဉ်ကတော့မပြတ်ပါဘူးဂျာ။၀င်၀င်ဖတ်ဖြင့်နေပါတယ်။မအားတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် ပိုစ်တွေ ၀င်မရေးနိုင်တော့တာပဲရှိတာပါ။
အခုလည်း စိတ်ရှုပ်စရာလေးတွေ တွေ ့လာလို ့၀ုိင်းစဉ်းစားပေးကြပါအုံးခင်ဗျား။
အခုတစ်လော လူငယ်တော်တော်များများ Ubuntu ကိုစိတ်၀င်စားလာကြတယ်။ကောင်းပါတယ် Linux Version တစ်ခုဖြစ်တဲ ့ဟာလေးကို စိတ်၀င်စားလာတယ်ဆိုတော ့။
တစ်နေ ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ ့တွေ ့တယ်။နာမည်တော ့မပြောတော ့ပါဘူး။သူကပြောတယ်ခင်ဗျ။ ဦးဘန်တူးပဲ သုံးတယ်ဆိုပဲ။ကိုယ်ကလည်း အလဲ ့တယ်မိုက်ပါလားပေါ့နော်။ သူလက်တောပ် ့မှာ ubuntu offline install လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့အဖက်တွေ ကစားပြတယ်။အင်းပေါ့ အဟုတ်မှတ်နေတာ ကိုယ်ကတော ့။ အဲဒါနဲ့ဦးဘန်တူးကို ဘာလို ့သုံးတာလဲ လို ့မေးကြည် ့မိတယ်။ Virus မရှိလို ့ပါတဲ ့။
ထားပါတော ့အဲဒါနဲ့သူနဲ ့စကားပြောရင်းနဲ ့၀င်းဒိုးဘက်ကို ရောက်သွားပြန်ရော။၀င်းဒိုးနဲ ့ပတ်သတ်လို ့သူသေသေချာချာမသိဘူး။ အခု Window7မှာ Drive မပေါ်တာကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတောင် သူမသိဘူး။
သူ window7သုံးဖူးတယ်တဲ့error များတယ် ဘာညာပေါ့ဂျာ။လျှောက်ပြောနေတယ်။ထားလိုက်ပါတယ်။
၀င်းဒိုးကို ပိုင်နိုင်မှ လင်းနစ်ကို သွားပါလို ့။
အဲဒါကို သူက ခင်ဗျားတို ့၀င်းဒိုးဘာကောင်းလဲတွေဘာတွေလုပ်သွားသေးတယ်။ဆက်မပြောတော ့ပါဘူးလေကုန်မခံချင်တာလည်းပါတော ့။ ၀င်းဒိုးကောင်းချက်တွေ ထပြောလိုက်ရင် ပက်လက်လန်ပြီး လှဲသွားမယ်။
ဟုတ်တယ် Window ဆိုတာက ကျွန်တော်တို ့စကိုင်လာတဲ ့အမျိုးအစားတစ်ခုပဲ။ပစ်ပယ်လိုက်ဖို့အဆင်မပြေဘူး။
ကျွန်တော် Window ကောင်းကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဦးဘန်တူး ကိုလည်းသုံးနေတာပါပဲ။
အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့Ubuntu 10.04 ကို ကျွန်တော်သုံးနေတာပါပဲ။
ဘယ်ဟာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေ ့မယ် ဒီနေ ့လူငယ်တော်တော်များများပါ။
ဦးဘန်တူးဆိုတာ ဘာလဲ။သူမှာဘယ်လို system တွေပါလဲ။ဘယ်လို အသုံး၀င်လဲ ဆိုတာကို မသိပဲနဲ ့တော ့ရမ်းမသုံးသင့်ပါဘူး။ စမ်းသပ်ယုံသုံးတယ်ဆိုရင်လည်း ဦးဘန်တူးမသုံးခင်က သုံးထားတဲ့Window ကို မမေ ့သင့်ပါဘူး။
ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ ့နိဂုံးလေးကတော့၀င်းဒိုးကိုတောင်ရေရေရာရာမသိပဲနဲ့ဥိးဘန်တူးကို သွားမကိုင်သင့်ဘူးလို ထင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က ၀င်းဒိုးရဲ ့နယ်ပယ်ထဲမှာပဲနေရတာ စိတ်ပျက်လာလို့ဦးဘန်တူးဘက်ကို လှည် ့တယ်ဆိုရင်လည်းတစ်မျိုးပေါ့။ ပြီးတော ့ဦးဘန်တူးသုံးတယ်ဆိုရင်ပဲ အလိုလိုနေရင်း ရာထူးတတ်နေသလိုလို ဘာလိုလို
ပြီးတော့system proxy ကို ဘယ်မှာထည် ့ရမလဲမသိလို ့။ Firefox မှာ သွားထည် ့ပြီး google ခေါ်တော ့ရတယ်။Package တွေဒေါင်းလုပ်ဆွဲတာ ကျတော ့မရဘူး ဘာညာပေါ့။စိတ်ညစ်တယ်။
အလိုလိုနေရင်း ကိုယ် Window7ကြီး သုံးမိတာပဲ အားငယ်လာသလိုလိုဘာလိုလိုနဲ ့။
ကဲ ့...အဲဒါလေး ကူဆွေးနွေးပေးကြပါဦးခင်ဗျား။
ကျွန်တော်ရန်ဖြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဒီကိစ္စလေးတွေက ရန်ဖြစ်တတ်လို့။ ။
ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာက ဘယ်လို အဆင့်တွေ ဘယ်လို အခြေခံတွေ ရှိမှာ ဦးဘန်တူးသုံးမယ်။အဲဒီလိုပေါ့ခင်ဗျား။
ဦးဘန်တူးကို သုံးချင်းအားဖြင့် ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရလာမလဲ။ဒီလိုလေးတွေ။
၀င်းဒိုးကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်လည်း ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရလာမလဲ ...... ဒါကတော ့ပြောစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်။
ထို ့ကြောင့် ၀ုိင်း၀န်းအကြံဉာဏ်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျား။ ။
ဦးဘန်းတု့ကိုခုထိ မသုံးသေးဘူး ... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ professional / navigational / aeronautical / software တွေ simulator တွေ ကို သုံးမယ် ဆို. ယူဘန်းတူး ကြိီးပေါ်မှာ သုံးလို့့ ရမရ မသေချာဘူး...
windows ပေါ်မှာတော့သေချာတယ် .. နောင်မှ ဦးဘန်းတု ကို စမ်း သုံး ကြည့်ပါမယ်.. တချို့ software တွေ က game တွေ လိုမဟုတ်ပါဘူး ..simulator မှာ သုံးထားတဲ အတိုင်း လက်တွေ့မှာ သုံးနိုင်မှ အပြင် မှာ အလုပ် ခွင်မှာ အစဉ် ပြေမှာပါ ။ ဦးဘန်းတု မသုံး ဘူးသေးလို့ အားငယ်တယ် ဆိုတာမျိုး လဲ မဖြစ်ပါဘူး .. windows မှာတင် လေ့လာ စရာတွေ များ နေသေးလို့့ပါ.. ဇူးဇူး ဆီ က ဦးဘန်းတုလေး .. ခနယူ install လုပ် ကြည့်မယ်။ ကျနော့ ရဲ့ အလုပ် တွေ ပေါ်မှာတော့ windows က အသုံး ဝင် ဆုံးပါဘဲ။ windows ပေါ်မှာတင်ထားတဲ professional software တွေကို သေချာသုံး နိုင် လို့ ကတော့ .. အလုပ် မှာ အစဉ်ပြေ ပေါ့ ခင်ဗျာ..
တခြားတော့မသိ။ Mac user တော်တော်များများကတော့ windows မသုံးခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာနေရင်တော့ windows သုံးတာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ထင်တာပဲ။
ubuntu ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ဘန်းကျော်မှာကတော့ window နဲ ့ကင်းဖို ့မဖြစ်သေးပါဗျား
windows နဲ့ပဲ စသုံးရမယ်လို့တော့ မဟုတ်ပာဘူး။ Linux နဲ့ စသင်ဖူးတဲ့သူတွေလည်း ရှိကောင်း ရှိနိုင်တာပဲ။သူဘာသုံးတယ် ငာဘာသုံးတယ်ဆိုတာ လိုက်ပြောနေစရာလည်း မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ application၊ ကိုယ်သွားမယ့်လိုင်း၊ သုံးရတဲ့ အရသာတွေကို မူတည်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်ရာ ကိုယ်ရွေးကြမှာပာပဲ။ အားသာချက်၊ အားနည်ချက်ကတော့ အကုန်လုံးမှာ ရှိတာပာပဲ။
လှည်းတန်းကနေ ဆူးလေကို သွားချင်တယ်ဆိုရင် လိုင်းကားနဲ့ သွားလည်းဖြစ်တယ်။ အထူးဆိုတဲ့ ကားတွေနဲ့ သွားလည်းဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ သွားလည်းဖြစ်တယ်။ ဆူးလေကို ရောက်ဖို့က အဓိကပဲ မဟုတ်လား။ ခြေချင်လျှောက်ချင်သပဆိုလည်း ဖြစ်တာပဲ။ အားလုံး ကိုယ်ကြိုက်ရာ ရွေးလို့ရတာပဲ။ ဒာကို မင်းတို့ bus ကားက မကောင်းဘူး ငာက ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ကွဆိုပြီး သွားပြောလို့ မရပာဘူး။ လိုင်းကားပောှကသူကလည်း သူ့ဖီလ်းနဲ့သူပာ။
ဘာနဲ့သွားလဲ ဆိုတာ အဓိက မကျပာဘူး။ ရောက်သွားဖို့ (အလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့) က အဓိကပာ။
မဟုတ်ဘူးကွာ ငာက ငာ့ကားအကြောင်းပဲပြောမယ် ငာ့ကားက ပိုကောင်းတာလို့ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း windows vs linux vs mac ဆိုပြီး နောက်ထပ် thread ဖွင့်လိုက်ပာလို့ တိုက်တွန်းချင်ပာတယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူအားလုံး ဝင်ငြင်း (ဆွေးနွေးစရာလို့ မထင်လို့ ဆွေးနွေးဆိုပြီး မသုံးချင်ဘူး)လို့ ရတာပော့။
အကြံပေးချင်တာကတော့ အစ်ကို လက်ရှိသုံးနေတဲ့ OS နဲ့ လုပ်လက်စ project ဖြစ်ဖြစ်၊ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ project ဖြစ်ဖြစ် ဆက်လုပ်ပာခင်ဗျာ။
PS: နောက်ခာ အဲသလိုမျိုး ကြုံခဲ့ရင် အသာလေး လွတ်ပေးထားလိုက်ပာ။ :rolleyes:
အဓိကက Windows နဲ့ Linux ဆိုတာ မတူညီတဲ့အရာနှစ်ခုလေ
အဲ့လိုမတူညီတဲ့အရာနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်လို့ဘယ်ရမလဲ? Ubuntu မှာလည်း သူ့ဟာသူ အားသာချက်တွေရှိသလို Windows တွေမှာလည်း သူ့အားသာချက်နဲ့သူရှိတယ်လေ။ GAMERS တွေကတော့ Windows ကိုပဲနှစ်သက်မှာပေါ့ ... Linux ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်း သူ့အကြိုက်ပေါ်သူမူတည်ပြီး ရှိတယ်လေ။ ကိုဇူဇူးပြောသလို Virus မရှိလို့ကြိုက်တဲ့သူရှိသလို compiz settings တွေကို ကြိုက်လို့သုံးတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး MAC မှာလည်း သူ့အားသာချက်နဲ့သူပါ။ ဘယ်ဟာကို ရွေးမယ် ဘယ်ဟာက ကိုယ့်အတွက်ပိုကောင်းသလဲဆိုတာ ကိုယ့်အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လေ။ နောက် ထပ်ပြောရရင် Cracking တို့ Hacking တို့ကို စိတ်၀င်စားတဲ့သူတွေကျတော့လည်း Backtrack ကိုသုံးမယ်လေ။ တကယ်ဆိုရင် သူ့အကြိုက်နဲ့ ကိုယ့်အကြိုက်တူမှမတူကြပဲ
သူပြောတာကို ကိုယ်မသိရင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ဆီမှာလည်း သူ မသိတဲ့အရာတစ်ခုတော့ အနည်းဆုံးရှိနေမှာပဲလေ... အဟတ်
ဒါဆိုရင် ညီသီတဲ့Ubuntu ရဲ ့အားသား ချက်လေးတစ်ချက်ပြောပြပါလား။
ကျွန်တော်လည်း networking ဘက်ကနေ မြင်ကြည့်မယ် linux နဲ့ windows ဆိုရင် linux ကို ပိုအသုံးများကြတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် သူက robust ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ free ရတယ် ကျွန်တော်တို့ local ကိုပဲကြည့်ပြီးဘာသုံးသုံးအဆင်ပြေပါတယ် ငါးရာ တစ်ထောင်ထက်ပိုမှ မကုန်တာ global ဆိုရင်တော့နည်းနည်းစဉ်းစားဖို့လိုလာပြီ windows နဲ့ linux ဘယ်ဟာရွေးမလဲ ကျွန်တော်တော့ free ရတဲ့ linux ရွေးမိမယ် ဒါကလဲ ကိုယ့် organization ရဲ့ nature, budget ကိုလဲကြည့်ရဦးမယ်လေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် IT သမားဆိုရင် နှစ်ခုစလုံးသုံးသင့်တယ် လေ့လာသင့်တယ် တခါတလေကျရင်ဖြစ်တတ်တယ် ငါတို့က developer တွေ network အပိုင်းသိစရာမလိုဘူးဆိုတာမျိုးတွေ network သမားတွေလဲဒီလိုပဲ OS အနေနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်း အတူတူပါပဲ
ကျွန်တော်ကတော့ နှစ်ခုစလုံးစိတ်၀င်စားတယ် အဲ့ထဲမှ linuxကိုပိုအားသန်တယ် opensuse နဲ့ ubuntu ပေါ့
windows7တော့မသုံးဖူးသေးဘူး စက်က နှိမ့်နေလို့ ဟဲဟဲ Mac OS တော့ ဒီတစ်သက်သုံးရလိမ့်မယ်မထင်ဘူး(စက်မှ မ၀ယ်နိုင်တာ)
ကျွန်တော် ubuntu ကို သုံးတာသိပ်မကြာသေးပါဘူး.. လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လောက်ကပါ. တော်တော်ကောင်းပါတယ်. သုံးရတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်. ဒါပေမယ့် လူအများစုက Window သုံးရတာကို ပိုပြီးတော့ သဘောကျနေကျပါတယ်. ...အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီး ဘာလို့ ubuntu ကိုမသုံးသင့်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်း 10 ချက်ကို ပြောပြပါမယ်. ဒါမှ ubuntu ကိုအရမ်းကြိုက်တဲ့သူတွေက သုံးပါလို့ တိုက်တွန်းလာရင် ပြန်ပြောနိုင်အောင်ပါ :P
၁.မ၀ယ်ရသေးခင် စမ်းကြည့်တာကို စိတ်မ၀င်စားဘူး
ကျွန်တော်တို့ မသိတာတစ်ခုကို ၀ယ်တဲ့အခါ စမ်းကြည့်ပြီးတော့ ဘာလုပ်မှာလဲဗျာ.. ရောင်းတဲ့သူက ကိုယ့်ထက်ပိုသိမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား.. ဘာလုပ်ဖို့ live CD နဲ့ စမ်းကြည့်မှာလဲ အားအားယားယား အလုပ်ရှုပ်လို့.. ကိုယ့်ထက်ပိုသိလို့ ရောင်းတာပဲမဟုတ်လား.. ပြီးတော့ ရင်ခုန်ရတာပေါ့.. စမ်းမကြည့်ပဲနဲ့ ၀ယ်ရတာက.
၂.ubuntu မှာဆို ဆော့ဖ်၀ဲတွေသွင်းရတာ အရမ်းလွယ်နေတယ်
ကဲ ubuntu မှာဆိုရင် synaptic package manager လေးဖွင့် ကိုယ်သွင်းချင်တာလေးကို checkbox မှာ အမှန်လေးခြစ်လိုက် ပြီးရင် apply ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက် ကဲ ပြီးပြီ. (internet connection တော့ရှိရမှာပေါ့.) လွယ်လွန်းနေတယ်ဗျာ.. မမိုက်ပါဘူး.. Window မှာဆို သွင်းခါနီး application တွေအားလုံးကိုပိတ်.. zip ဖိုင်ဆို zip ကိုဖြည်.. ပြီးမှ .exe ကိုလိုက်ရှာ...သွင်း.. ပြီးရင် Internet Explorer ကနေပြီး update manager ကိုသုံး update လုပ်.. ကဲ မရှုပ်ဘူးလား.. ဒါမှ software သွင်းတဲ့ အရသာစစ်စစ်..
၃.ဗိုင်းရပ်စ်တွေကလည်းအရမ်းနည်း.. လုံခြုံရေးကလည်း အရမ်းကောင်းနေတယ်
window သုံးတဲ့အခါ virus scanner လေး ကိုသုံးရတာ ဖီလင်လေးတစ်မျိုးပေါ့..အေးအေးဆေးဆေးရှိတယ်လေ.. ကိုယ့်ကွန်ပြူတာ မြန်သင့်သလောက်မမြန်တော့ဘူး.... ဒီတော့ အလုပ်တွေပြီးတာလည်း နှေးသွားမယ်.. ဒါဆို လူတွေကလည်း ကိုယ့်ကို မြန်မြန်သွက်သွက်အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူလို့ ထင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး.. ကဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲ ... ခပ်အေးအေးလေးနေလို့ရတာပေါ့.. ubuntu သုံးပါပြီ..ကိုယ့်ကွန်ပြူတာက အရမ်းမြန်နေတော့ အလုပ်တွေ မြန်မြန်ပြီး.....ရာထူးတွေတိုးနေရင် ပိုက်ဆံတွေပိုရလာနေပါဦးမယ်.. အဲဒါဆို အဲဒီ့ပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်မှာသုံးမယ်ဆိုတာက ခေါင်းရှုပ်စရာကြီးပါဗျာ..
၄.office software တွေက အလကားနီးပါးရနေတယ်ဗျာ.
Microsoft Office အတွက်ကို $400+ လောက်ပေးရတယ်ဗျာ (သူတို့နိုင်ငံမှာပြောပါတယ်) Openoffice.org က အလကားတဲ့.. ဘာလုပ်မှာလဲ. လူအထင်သေးတာပေါ့နော်.. ဒီပိုက်ဆံတွေကို တစ်ခြားအကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေကို ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ ပရဟိတအသင်းလေးမှာ (ဒါကတော့ကြော်ငြာ၀င်တာပေါ့နော်) လှုလိုက်မဲ့အစား Bill Gate ကိုပဲ ပေးလိုက်တော့မှာပေါ့နော်.. သူလည်း ငွေလိုရှာမှာပေါ့.
အလကားရတာဆို ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးဗျာ.. အလကားရတဲ့ operating system ဆို ပိုဆိုးတာပေါ့..ကဲ window ဆို စျေးကြီးကြီးပေးလည်း၀ယ်ရတယ်... ကိုယ်သွင်းချင်တိုင်းလည်း တွေ့သမျှကွန်ပြူတာကို လိုက်သွင်းလို့မရဘူးနော်.. ကိုယ့်အတွက်သီးသန့်...ဘယ်လောက်အဆင့်မြင့်လဲ...ပြီးတော့ ကိုယ့်window copy ကို genuine ဖြစ်ချင်ရင် activate လုပ် ကိုယ့် personal informationတွေပေး ဒါမှ technical support ရမှာနော်.. ပြီးရင် နှစ်နှစ်တစ်ခါလောက် အပျင်းပြေ ထုတ်နေတဲ့ vista တို့7တို့လို တွေအတွက် ငွေတွေအကုန်ခံလိုက်ဦးပေါ့ဗျာ.. ကောင်းမှကောင်းနော်
၆.ရွေးစရာ free softwareတွေအရမ်းများနေတယ်
ကဲ window မှာသွင်းဖို့ ဆော့ဖ်၀ဲ လိုချင်ပြီဆို ကွန်ပြူတာ အခွေအရောင်းဆိုင်ကိုပြေးရပြီဗျာ.. ဘယ် ဆော့ဖ်၀ဲကို သုံးရင်ပိုကောင်းမလဲ စွတ်စပ်၀ယ်လို့ မရဘူးနော် ဆော့ဖ်၀ဲတွေက စျေးကြီးတယ်ဗျ.. (သူတို့နိုင်ငံမှာနော်) ဒီတော့ microsoft ရဲ့ catalog ကိုဖတ်ကြည့် သူ့ ဆော့ဖ်၀ဲတွေ ကောင်းကြောင်းညွှန်းထားလိမ့်မယ်ဗျာ အဲဒီကနေမှ Office software တွေ Image Editors တွေ ဘာတွေညာတွေ ၀ယ်ဖို့လုပ်.. ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်က သူတို့ ညွှန်းထားတာကို မကြိုက်ဘူး တစ်ခြားတစ်ခုကို ပိုကြိုက်မိနေလို့ကတော့ ကဲ ကိုယ်၀ယ်တဲ့ဆိုင်က အရောင်း၀န်ထမ်းကို သာမေးကြည့်ပေါ့ဗျာ.. သဘောကောင်းတဲ့ ခပ်ချောချောအမကြီးနဲ့ တွေ့ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်.. အပေါက်ဆိုးဆိုး ကွန်ပြူတာအကြောင်း နကန်းတစ်လုံးမသိတဲ့ ရုပ်ဆိုးဆိုး အရောင်းစာရေးမနဲ့ တွေ့လို့ကတော့ မထမ ကိုယ့်ကို မကြည်သလို ကြည့် နောက် လေသံမာမာနဲ့ စကားပြော ပြီးရင် မောင်းမထုတ်တာကံကောင်းလို့ ပြောရမှာပဲ..
အဲဒီတော့ Scribus,Nvu,Gimp,Openoffice တွေလို အလကားပဲတင်း လွယ်လွယ်ဒေါင်းလုလုပ်လို့ရနေတဲ့ ဟာတွေကို သုံးမယ့်အစားတော့ ဘတ်စ်ကားကို ကျပ်ကျပ်ညပ်ညပ်တိုးစီးပြီးတော့ပဲ အခွေဆိုင်တွေမှာ window ဆော့ဖ်၀ဲတွေကို ပြေး၀ယ်တော့မှာပေါ့ဗျာ..
၆.Technical support ကလည်း မြန်မြန်နဲ့လွယ်လွယ်ချည်းရနေတယ်ဗျာ.
ကဲ IRC က #Ubuntu မှာ ubuntu users ၁၃၀၀ လောက် က ကိုယ်မေးသမျှကိုဖြေဖို့အတွက် စောင့်နေကြတယ်ဗျာ.. ပြီးတော့ http://help.ubuntu.com မှာ သွားကြည့်လိုက်ပါဦး.. Help Document တွေက အကြောင်းအရာစုံ Up-to-date တွေချည်းပဲဗျာ.. Open source ဖြစ်တဲ့အတွက် bug တစ်ခုခုပါရင် လူတိုင်းပြင်နိုင်တယ်( လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ ပညာရှင်တိုင်းပေ ါ့ :P) window မှာလို ကိုယ်တစ်ခုခု error ဖြစ်ပြီဆို ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိနဲ့ microsoft ပဲ ဖုန်းလှမ်းဆက်ရတော့မလိုလို ဖြစ်မနေရတော့ဘူးဗျာ.... မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီး အဖြေကိုသိနိုင်သွားရော.. ဒါဆို ကွန်ပြူတာဆိုတာ လျှို့၀ှက်ချက်မရှိတော့သလိုဖြစ်နေတော့မှာပေါ့ မကောင်းသေးပါဘူးနော်..
၇.ရွေးစရာ interface တွေအရမ်းများတယ်
Window မှာလည်းရွေးစရာတွေရှိပါတယ်... vista ဖြစ်ဖြစ် xp ဖြစ်ဖြစ် နည်းနည်း ကွဲတဲ့ version ကို ငွေပိုပေးပြီး ၀ယ်လိုက်ရင် သုံးလို့ ပိုကောင်းမှာပါ.. Ubuntu မှာကျတော့ Gnome Desktop နဲ့သွင်းမလား KDE enviroment သုံးတဲ့ Kbuntu သွင်းမလား... ? ကဲ ကျောင်းတွေမှာ ကလေးတွေသုံးဖို့ဆိုရင် Edubuntu သုံးမလား..မမိုက်ပါဘူးဗျာ.. ကလေးသုံးသုံးလူကြီးသုံးသုံး ဒီ version ပဲသုံးရမယ့် window ပဲကောင်းပါတယ်ဗျာ
ပြီးတော ကွန်ပြူတာဆိုတာ နောက်ဆုံးပေါ်ကိုပဲကိုင်သင့်တာနော်.. အနည်းဆုံး 1GB လောက်ရှိတဲ့ memory နဲ့ အမြန်စား graphic card တစ်ခုရှိမှ သုံးနိုင်တဲ့ operating system ကမှ အဆင့်မြင့်တာပေါ့.. ကဲ ubuntu သုံးတဲ့သူတွေကျတော့ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာက နည်းနည်းခေတ်နောက်ကျနေရင် xbuntu ကိုသုံးလို့ရတယ်ဗျာ
ဒါပေမယ့်ဗျာ ကွန်ပြူတာ သုံးတယ်ဆိုတာ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်မှသုံးပေါ့ဗျာ.. ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ အင်တာနက်တွေဘာတွေသုံးမနေပါနဲ့ဗျာ အလကား အလုပ်ရှုပ်တယ်
rotating desktop တွေ desktop transparency effect တွေ အရမ်းမိုက်တဲ့ တစ်ခြားeffect တွေ အဲဲဒါတွေ မသုံးပါနဲ့ဗျာ တော်ကြာ သူများတွေက ကိုယ့်် desktop လေးကိုကြည့်ပြီး သိပ်အလှပြချင်တဲ့ ကောင်လို့ထင်နေပါဦးမယ် window vista လေးသုံးပြီး ရိုးရိုးနေတာပဲကောင်းပါတယ်ဗျာ
၁၀.အရမ်းမိုက်တဲ့ CLI ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဗျာ
ကွန်ပြူတာသမားတွေအတွက် အသုံး၀င်တယ်ဗျာ.. ဒါပေမယ့်ဘာလုပ်ရမှာလဲနော် ကိုယ့်ဟာကို GUI လေးနဲ့ပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ပျော်ပျော်ပါးပါးသုံးတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား...တော်ကြာ မသုံးတတ်သုံးတတ်နဲ့ command တွေလျှောက်ရိုက်နေလို့ ကွန်ပြူတာလေးပျက်သွားပါဦးမယ် ..
ref:Top 10 reasons not to use Ubuntu
Free ထက်စာရင်တော့ OpenSource ဖြစ်တာကို ပိုသဘောကျတယ်ဗျ .. ဟီး ...
အစ်ကို MAC Book ကိုင်ချင်ရင် ထီထိုးလေ... အနော်ကတော့ အမှိုက်ပုံထဲမှာများ လာပစ်လေမလားလို့ ... စောင့်နေရဲ့ ... အဟတ်
မသိလို့ မေးပါရစေ..Ubuntu ဆိုဒါ Linux လား Unix လားပြောပြကြပါအုန်း...
Ubuntu က Linux Distro တစ်ခုပါ UNIX နဲ့မဆိုင်ပါဘူး ... Ubuntu အကြောင်း ပိုသိချင်ရင် ...
Nice Words :cool::113::113:
ထီထိုးတာက မသေချာဘူး အမိူက်ပုံမှာသွားစောင့်နေတာမှာ သေချာဦးမယ် (လူကြီးတွေအိမ်ဘေးက အမိူက်ပုံလေ)
အင်း .. .အဲ့လူကြီးအိမ်က ကလေးတွေ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ MAC book Air ကိုကောက်ပေါက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်နော်..
လေထဲမှာတင် ဂျွမ်းသုုံးလေးပတ်လောက်ပစ်ပြီးဖမ်းမှာ .. အဟတ်
ဟ တွေ ချည်းပဲဟ..နင်ဟာကလည်း ဟ :d ဟင့်နော်
Zu Zu Aung wrote: »
I'm using zawgyi 2009.
ဆက်ပြောရင်တော ့...ယူနီကုတ် မြင်းရိုင်းနဲ ့..ဇော်ဂျီ ဇော်က တို ့ဆီရောက်ကုန်တော ့မှာပဲ ခွီ
ဒါလည်း ၇န်ဖစ်နိုင်တဲ ့အပေါက် ဆိုတော ့..ကျောတော ့ပါ၀ူး ဟီး :d
Windows Vs Ubuntu Vs Mac Vs x.x.x နဲ့တင် ရန်ဖြစ်လို့ ကောင်းနေပာပြီ။ (နေဟပြီ မဟုတ်ဘူးနောှ။ par လို့ရေးတာ။ )
ဘန်းကျော်ဆိုရင် .. ဘန်းကျော်ပေးတဲ့ Site တွေ
Saudi Proxy တွေနဲ့ဆို ကျော်လို့ရတယ်လေ.. မဟုတ်ဘူးလား? မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေတော်များများနဲ့ Fix မဖြစ်သေးတဲ့ အကြောင်းက Dual Boot လုပ်ထားရင်တောင် Windows နဲ့ Ubuntu တူတူတွဲထားရင်တောင် Windows ကိုပဲ တတ်နေကြတာကြောင့်ပါ.. အနော်လည်း အဲ့လိုပါပဲ .. ခွိ
windows ကတော့ industry standard OS လိုဖြစ်နေတော့ professional သုံးချင်ရင် သူရှိမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ Virus ပြဿနာ security ပြဿနာတွေရှိပေမယ့် လုံခြုံအောင် ကာကွယ်တတ်ရင် သိပ်ပြီး စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ubuntu ကလည်း open source ဆိုတော့ တမျိုးကောင်းတာပဲ။ သူများတွေ ကြိုးကြိုးစားစားရေးထားကြတဲ့ software တွေကို တစ်ခွေ ၁၀၀၀ ကျပ်ပေးပြီး သူခိုးနည်းနဲ့ မသုံးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ တစ်ခုက အခြားတစ်ခုထက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာထက် မတူဘူးလို့ ပြောတာက ပိုပြီး သဘာ၀ကျပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက နေရာတိုင်းမှာ internet connection ကလုံလောက်အောင် မရနိုင်တော့ လူတွေက linux သုံးရတဲ့ အရသာကို သေသေချာချာသိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ စိတ်မ၀င်စားတာလည်း အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ Windows လဲသုံးမယ် linux ကိုလည်း စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ usb pendrive ထဲမှာ linux ကို သွင်းပြီး သုံးတဲ့နည်းလမ်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ကိုဇူဇူးသာ hacking လုပ်ဖို့စိတ်၀င်စားတယ်ဆိုပါစို့....Linux platform အတွက် tool တွေကို windows platform ထက် ပိုပြီး hacker guru တွေက ညွှန်းသဗျ။dictionary ၊brute force words တွေကို linux packges တွေမှာ ကြည့်နိုင် ထပ် ထည့်နိုင်ကြောင်းပါ။..မှတ်ချက်။ ။အနော် hacker မဟုတ် ၊ hacking မလုပ်တတ်ပါ။ကြားဘူတာပါ။
mmustudents.ning ကို ဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။MZ က ကိုTsuna lade ပါလာ၀င်ဖတ်တာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ခုတော့ မရှိရှာတော့ဘူး။ning ကငွေတောင်းလို့။admin တွေလည်း ဟိုရောက် ဒီရောက်ဖြစ်ကုန်ပြီ။
demon-13 wrote: »
ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီက ကိုရဲမြတ်သူနဲ ့ပတ်သတ်ပြီးသိလာတာပါ။ အဲဒီဆိုဒ်လေးလည်း ကျောင်းဆိုဒ်ထဲမှာတော်တော်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်အမြင်နဲ ့ပြောရရင်တော့ information security အတွက်ဆိုရင် ubuntu ရိုးရိုးထက်စာရင် backtrack ကပိုကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် ubuntu edition တစ်ခု security နဲ ့ပတ်သတ်တဲ့ tools တွေစုထားတဲ့ edition တစ်ခုကိိုမြင်ဖူးတယ်။ ကွန်မကောင်းလို ့မဒေါင်းခဲ့ရပါဘူး။ backtrack ကတော့ တင်ဖူးတယ်ဆိုရုံသက်သက်သာ စမ်းဖူးတယ်။ ubuntu မှာ တကယ်လုပ်မယ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် backtrack က tool တွေအများကြီးပြန်သွင်းရမှာပါ။ Linux distro တွေဆိုတာကလည်း မိတ်ကပ်မလိမ်းရသေးတဲ့ကောင်မလေးတွေလိုပါပဲ။ ပြီးမှကိုယ်သင့်သလို သင့်တော်တဲ့ မိတ်ကပ်ရိုက်လိုက်ကြတာပါပဲ။
Linux distro တွေဆိုတာကလည်း မိတ်ကပ်မလိမ်းရသေးတဲ့ကောင်မလေးတွေလိုပါပဲ။ ပြီးမှကိုယ်သင့်သလို သင့်တော်တဲ့ မိတ်ကပ်ရိုက်လိုက်ကြတာပါပဲ။
ဥပမာကိုတော့ကြိုက်သွားပြီ။ မွေးကင်းစကလေးနဲ့တော့ နှိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ :P
Ubuntu အတွက် Offline Update လိုပဲ Backtrack က Tools တွေကို Offline Package တစ်ခုလုပ်ပေးမယ့်သူရှိရင်ကောင်းတယ်။ ( ကိုရဲရေ .. မ လိုက်ပီ)
Ubuntu is Ubuntu and everybody gets the same package at no cost. Secondly, Ubuntu is very user friendly and is within reach ofawide array of computer users. Installation isasnap.Ubuntu is free of cost and can be used for any number of computers. Due to increased pressure, lots of people were using pirated operating systems in countries where otherwise, the need of computer education is more.Ubuntu is built on Linux and like many other Linux based systems, it’s free. One of the major advantages in running an open-source operating system is community support.There is very little maintenance cost and it is easy to run and maintain. Further, if you just want to check out the OS, you have the option to boot from the CD, without installation, and try out the Ubuntu experience.
Pls tellme how to used Ubantu by memory stick
How to use ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်ပြီးလေ့လာပါ တစ်ခုခုလုပ်မရမှ ဘယ်လိုလုပ်မရဘူး ဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ် အတိအကျနဲ့ပြန်မေးပါ How to install ဆိုရင်တော့ ဖြေပေးနိုင်ပါတယ် UNetbootin နဲ့ Install လုပ်ပါ အောက်မှပြထားတဲ့ Link ကနေ Free Download လုပ်လို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ubuntu ကြိုက်တဲ့အထဲ အိုင်လဲပါသကော။ photoshop သုံးလို့ရတယ်။ ကျော်ခွလို့ရတယ်။ Game ဆော့လို့ရတယ်။ wireless hack လို့ရတယ်။ မြန်မာစာလဲရတယ်။ virus လဲသတ်လို့ရတယ်။ hidden folder တွေကြည့်လို့ရတယ်။ admin pass ဖေါက်လို့ရတယ်။ windows7တော်တော်လေးခံရလောက်တဲ့ OS လေးမို့ကြိုက်တယ်လို့ အိုင်လဲ ပြောချင်ပါသကော...
Photoshop ကို ubuntu မှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာ Wine နဲ့အသုံးပြုတာကို ပြောချင်တာများလား? ဒါမှမဟုတ် Gimp ကိုပြောချင်တာလား? Photoshop ကို Wine နဲ့ အသုံးပြုတာဆိုရင် Windows, MAC မှာလိုမျိုး Raw Installation ထက်ပိုပြီးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ Crush လည်း ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။
Game နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ဆိုရင် Witcher2တို့ Alice Madness Returns တို့လိုမျိုး Windows Game တွေကိုဆော့လို့မရဘူးထင်တယ်။ သာမန် အပျင်းပြေ Game ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ SuperTux2 တို့ Frests on Fire တို့လောက်ပဲ ကောင်းတာရှိမယ်ထင်တယ်။ Limbo လို Game တွေရှိပေမယ့် Free မရဘူးဗျ။ Designer နဲ့ Gamer တွေအတွက်ကတော့ Ubuntu ထက် Windows က ပိုကောင်းတယ်လို့ မြင်တယ်။
ဒါနဲ့ စကားစမပ် admin pass ဖောက်လို့ရတယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ မသိဘူးဗျ။ သိပ်မရှင်းလို့ပါ။
p.s. ကျွန်တော်လည်း Ubuntu User တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် Development ကို ချန်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ရင် Ubuntu က Windows ကို မယှဉ်နိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော် Ubuntu ကိုမကြိုက်ဆုံးနှစ်ချက်ရှိပါတယ်
-တစ်ခုက Graphic Drivers တွေ 95% လောက်ကို Support မလုပ်ပေးနိုင်တာ ပါ
ကျွန်တော် Nvidia 2GB Graphic Card ကြီးလဲ အလကားဖြစ်သွားပါတယ်
- နောက်တစ်ခုက Ubuntu မှာ Downloader တွေများကြီးရှိပါတယ် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း
IDM ရဲ့ခြေဖျားတောင်မမှီတာတော့ လေပါတယ်
ကျွန်တော်လဲ Ubuntu သမားပါပဲ ... ဒီနှစ်ချက်သာအဆင်ပြေရင် တော်တော်မိုက်ပါပီ ဟိဟိ
June 2012 edited June 2012 Moderators
It works on my brother's laptop with Nvidia 2GB Graphic! But, it's not easy to simply install like in Windows and Mac. Try reading this one! really helpful! ^^
Did you already tried with wget? LoL. It's really awesome, you only need <b>Terminal</b> for that!
There are other open source download tools for Ubuntu, but I simply forgot those. May be @CalmHill remembered them. ^^
Nvidia က ပြဿနာမလုပ်တာ ကြာပါပြီ Nvidia က Linux အတွက် Open Source မပေးပေမယ့် Binary ထုတ်ပေးပါတယ် အဲဒါကြောင့် Nvidia ဆိုရင်တော့ အလုပ်လုပ်တယ် Ubuntu မှာ Gnome သုံးနေရင် Restricted Driver ကနေထည့်ရင်ရပါတယ် Server ဆိုရင်တော့ jockey-text နဲ့ထည့် Nvidia ကနေတော့ မလိုအပ်ရင် Download လုပ်မထည့်နဲ့။
Download ကတော့ Browser ကနေတော့ IDM လို အဆင်ပြေပြီးမြန်တာ မရှိပါဘူး။ Command Interface သုံးရင်တော့ Axel or Aria2 ကိုသုံးရင်ရတယ် Performance ကတော့ IDM ထက်မလျော့ပါဘူး အရင်တုံးကဆိုရင် Rapidshare လေးဝယ်ထား Login ဝင်ပြီးတော့ Cookies လေးကို Export လုပ် နေ့ခင်းရုံးသွားရင် Aria2 လေးနဲ့ Download လုပ်ရမယ့် စာရင်းလေးနဲ့ ပစ်ထားခဲ့တာပဲ ညနေအိမ်ရောက်ရင် ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရနေပြီ အခုတော့ Megaupload ပြဿနာတက်ကတည်းက ရုပ်ရှင်လည်းရှာရတာ ရှားပါသွားတော့တာပဲ :P
အခုတော့ Megaupload ပြဿနာတက်ကတည်းက ရုပ်ရှင်လည်းရှာရတာ ရှားပါသွားတော့တာပဲ :P
အဲဗျ. Mediafire ကြီးတစ်ခုလုံးရှိနေတာ Megaupload လိုသေးလို့လား? ^^
Mediafire ကလည်း Link တွေကို Search လုပ်ပြီးလိုက်ရှာနေတာ ရုပ်ရှင်ဆိုရင် အကုန်ဖျက်တော့တာပဲ အဲဒါကြောင့် bit.ly လိုဟာတွေနဲ့ Hide လုပ်ပြီး တင်ကြရတော့တယ် အဲတော့ ရုပ်ရှင်ရှာရတာ အတော်ခက်လာတယ် ဘာမှတော့ မဖြစ်ပါဘူးလေ Hollywood လည်း ကိုယ်ကြည့်သလောက် အလျင်မှီအောင် လိုက်မရိုက်နိုင်တော့ပါဘူး အသစ်ထွက်တာလေးပဲ ခဏစောင့်စောင့်ပြီး Mediafire ပေါ်ရောက်မှ ကြည့်ပါတော့တယ်
အသစ်ထွက်တာလေးပဲ ခဏစောင့်စောင့်ပြီး Mediafire ပေါ်ရောက်မှ ကြည့်ပါတော့တယ်
MediafireMoviez ကတော့ အစုံဆုံးပဲ... :P
တော်ပြီပြောနေရင်းနဲ့ Ubuntu ကနေ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ကုန်ပြီ Ubuntu အကြောင်း မကောင်းဆက်ပြောကြဦးစို့ :P အရင်ကတော့သုံးနေတာပဲ Unity နဲ့ထွက်ကတည်းက သိပ်မသုံးချင်တော့ဘူး အင်တင်တင်ဖြစ်လာတာ ကြာလာလေလေ လေးလာလေလေပဲ 3D နဲ့ဆိုပိုဆိုးသေးတယ် ဒါတောင် ကွန်ပျူတာက Graphic Card ဟာ နောက်ဆုံးထုတ် မဟုတ်ပေမယ့် အတော်ကောင်းပါတယ်။ Application တစ်ခုဖွင့်လိုက် တော်တော်နဲ့တက်မလာဘူး ဖွင့်နေသလား မဖွင့်နေသလားလည်း Progress လည်းမြင်ရတော့ အဲဒါနဲ့ Mouse များကပ်နေသလားဆို ထပ်ထပ်နှိပ် ဒါလည်းမတက်လာဘူး ခဏနေတော့ ၅ ခါလောက်နှိပ်မိထားတော့ Instance5ခုလောက်နဲ့ ပွင့်လာပါရောလား Mac နဲ့ဆင်အောင် လုပ်ထားသေးတယ် ခက်တာက Mac လိုလည်းသုံးလို့ အဆင်မပြေ အဲဒါနဲ့ Gnome Shell လေးတင်ပြီး သုံးနေတယ် အရင်ကပြောသလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသုံးလို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ပုံပြင်ဖြစ်သွားရှာပြီ။
ခက်တာက Mac လိုလည်းသုံးလို့ အဆင်မပြေ အဲဒါနဲ့ Gnome Shell လေးတင်ပြီး သုံးနေတယ် အရင်ကပြောသလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသုံးလို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ပုံပြင်ဖြစ်သွားရှာပြီ။
MAC မှာ ကြိုက်တာက Dock System ပဲ။ အခု Ubuntu Unity ကြီးက သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ Projector နဲ့ဖြစ်ဖြစ် တွဲတပ်သုံးလိုက်ရင် ပါမလာတော့ဘူး။ :-/
Dock အတွက် Ubuntu မှာ Docky သွင်းထားလိုက်တယ်။ ရှယ်ပဲ။ Unity ထက်ပိုသုံးရ အဆင်ပြေတယ်။ Ubuntu မှာ တစ်ခုပဲ ပြဿနာဖြစ်နေတာက Photoshop လိုမျိုး Gimp ရှိပေမယ့် Photoshop လောက် tools မစုံတာခက်တယ်။ Linux အတွက်လည်း Photoshop ကို ရောင်းပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်။ ~O)
Ubuntu မှာ အသုံးအဝင်ဆုံးကတော့ shell ပဲ။ Ubuntu ကို UI နဲ့ မသုံးဖြစ်တာတောင် ကြာပြီ။ နောက်ပိုင်း Unity graphic က Virtual Box မှာ တင်သုံးရင် အဆင်မပြေတော့ဘူး။ အရင်ကထက်လေးလာလို့ virtual box မှာတောင် မတင်တော့ဘူး။
လက်ရှိ server တွေ အားလုံးကို ubuntu ပဲ သုံးတယ်။ အခု Amazon AWS မှာ Ubuntu နဲ့ Micro Instant လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ဆောက်လို့ရတယ်။ အရင်ကလို ခက်ခက်ခဲခဲ မဟုတ်တော့ဘူး။
Ubuntu ရဲ့ UI design တွေကို မေ့နေတာတောင် ကြာပြီ။
Shell ကတော့ ဘယ် Linux ဖြစ်ဖြစ် အတူတူပဲဟာ Specific Command လောက်ပဲ ကွာတာပဲ။ တကယ်က AWS မှာ Create လုပ်တာက အစကတည်းက မခက်ပါဘူး လူတွေသာ တဖြည်းဖြည်းတုံးသွားလို့ ခက်တယ်ထင်လာကြတာ :P ငါလူရိုက်ပေါက်တွေ ပြောမိပြန်ပြီ အဲလိုလူတွေအတွက် အခုတော့ Marketplace မှာသွား ကလစ်နှိပ်တတ်ရင် ရပြီပဲ။ Ubuntu Server ကသုံးလို့ အဆင်ပြေပါတယ် လွယ်အောင်လုပ်ထားတော့ သူလုပ်ထားတွေသုံး Apache ဆိုရင် a2ensite တို့ a2enmod တို့သုံးရင်းနဲ့ Apache ထဲက Configuration တွေမေ့ကုန်တော့ တစ်ခြားဟာသုံးတော့ ရွာလည်တာပဲ Doc ကြည့်လိုက် ကူးထည့်လိုက်နဲ့ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ လူလည်းတုံးသွားမှာ စိုးရိမ်ရတာနဲ့ အိမ်မှာဆိုရင် FreeBSD ကိုတစ်စစီထည့်သုံး Build လုပ်သုံးတယ်။
မအပ်စပ်တာတွေ စိတ်ကူးယဉ်နေတာ Photoshop ကို တစ်ထောင် ထောင့်ငါးရာ ပေးဝယ်နိုင်မှတော့ သူသုံးတဲ့စက်ဟာ OS တစ်ခုမှ ဝယ်မထားနိုင်ဘူးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်လောက်တော့ဘူး မဟုတ်လား။ Wine နဲ့သုံးတယ်ဆိုတာကိုက လွယ်တာကို မခက်ခက်အောင်လုပ်တာ Ubuntu သုံးတယ်ဆိုကတည်းက Pirate မလုပ်ချင်တာက အကြောင်းအရင်းတစ်ခု အဲဒါကို Pirate လုပ်ရမယ့်ပစ္စည်းကို တကူးတကအခက်ခဲခံပြီး Wine နဲ့သုံးတဲ့လူတွေ ဘာလို့အဲလိုသုံးလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်တာ အခုထက်ထိအဖြေမထွက်ဘူး ခက်တာကို လွယ်အောင်လုပ်သုံးတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး လွယ်တာကို အတင်းခက်အောင် လုပ်သုံးတာတော့ ဘာလို့လဲမသိ :P
အဲဒါကို Pirate လုပ်ရမယ့်ပစ္စည်းကို တကူးတကအခက်ခဲခံပြီး Wine နဲ့သုံးတဲ့လူတွေ ဘာလို့အဲလိုသုံးလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်တာ အခုထက်ထိအဖြေမထွက်ဘူး ခက်တာကို လွယ်အောင်လုပ်သုံးတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး လွယ်တာကို အတင်းခက်အောင် လုပ်သုံးတာတော့ ဘာလို့လဲမသိ :P
ဟုတ်ပါ့ဗျာ။ Pirate သုံးဖို့ Wine ကို အပင်ပန်းခံသွင်းနေမယ့်အစား တစ်ခွေတစ်ထောင် Windows7တစ်ခွေ ဝယ်သွင်းလိုက်တာကမှ အဆင်ပြေအုံးမယ်။ Wine နဲ့ဆိုရင် Crush ဖြစ်တာနဲ့ ဘာနဲ့။ Ubuntu မှာ crack သုံးဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာကမှ လူကြားလို့မကောင်း! LOL :-j
Gimp ကို ကြိုးစားပြီး သုံးဖူးတယ်။ အဓိက ပြဿနာက Layer Properties တွေပဲ။ Gimp နဲ့ PSDကို ဖွင့်လိုက် Photoshop နဲ့ ဆွဲထားတဲ့ layer properties တွေ အကုန်ပျောက်။ တချို့ ဖောင်းကြွတွေက Photoshop မှာ Layer Properties နဲ့ လွယ်လွယ်လုပ်လို့ရပေမယ့် GIMP မှာက တော်တော်ကို မလွယ်တာ။ နောက်ဆုံးတော့လည်း လက်လျော့လိုက်တယ်။
Web Developer အတွက် Linux က အဆင်ပြေပေမယ့် web designer အတွက်ကတော့ လုံးဝ အဆင်မပြေဘူး။ photoshop မသုံးပဲ web design နဲ့ APP UI Design ဆွဲဖို့ဆိုတာက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ တော်တော်ခက်တယ်။
PSD to HTML လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အရမ်းသိသာတယ်။ အရင်တုန်းကဆို ငါကွ ... Gimp သုံးပြီး Ubuntu မှာပဲ ကျင်လည်တော့မယ်ဆိုပြီး သန္ဒိဌာန်ချထားပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီ layer ပြဿနာတွေကြောင့် အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း Gimp released တွေမှာ layer တွေခွဲလို့ရနေပြီထင်တယ်။ တစ်ခေါက်မြင်ဖူးတယ်။ အရင်ကလို လုံးဝ ကြည့်မရတာမျိုးတော့ မရှိတော့ဘူး။ ဘာပဲပြောပြော Gimp နဲ့ PSD to HTML လောက်တော့ အဆင်ပြေပြေ သုံးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်။ ဒါဆိုရင် developer တွေလောက်ကတော့ Ubuntu မှာတင် ကျင်လည်နေနိုင်ပြီ။ Designer တွေကတော့ Windows or MAC အကောင်းဆုံးပဲ။ Adobe ရဲ့ အစွမ်းတွေပေါ့။ ~O)